Mifananidzo Yemuchato - Iwo akanakisa matipi ekugara uchitaridzika zvakanaka | Bezzia
Susana godoy | 21/04/2021 12:00 | Runako
Mifananidzo yemuchato inogara iri imwe yeano fadza ndangariro kuti tichava nezuva rakakosha kudai. Neichi chikonzero, isu tinogara tichitya kuti hatizobudirire sezvataizoda. Ichokwadi zvakare kuti kune akati wandei matekinoroji ekuvandudza iwo asi havazi vese mwenga nechikomba vari kuda kuvapa kuenda-mberi.
Nokudaro, Tichatevera akateedzana matipi kana mazano kuti tigare tichikwanisa kutaridzika zvakanaka mumifananidzo. Zvekuti isu tine mamwe chaiwo mapikicha emuchato, sekungofanana neruzhinji rwedu rwunozvifarira. Kana muchato wako uri padhuze kupfuura iwe zvaunofunga, saka tanga kudzidza zvese zvinotevera zvakanaka.
1 Tevedzera kumira kwevakakurumbira
2 Gara uchizorodza muromo wako
3 Tarisa zvishoma pasi
4 Iyo yakanakisa yakazara-muviri mamiriro
5 Kufambisa mafoto kunogara kuchikunda
Tevedzera kumira kwevakakurumbira
Zvinoitika kuti zvinotaridzika zvakanaka mumifananidzo yemuchato, uine chokwadi chekuti imwe neimwe yatove nehunyengeri hwayo, asi mukati mavo vese, pane mamwe anogara achishanda. Icho hunyengeri hunoshandiswa nevazhinji vevanhu vane mukurumbira vatinoona zuva rega rega pasocial network ndihwo hunotevera. Panzvimbo pekutarisa kumberi, ivo vanogara vachitenderedza zviso zvavo zvishoma. Pamusoro peizvi, usakanganwa kutambanudza mutsipa wako, nekuti izvi zvinoita kuti titarise kunge zvishoma zvishoma. Haufanire kusimudza chirebvu chako kuti urove chimiro chakadai. Chengetedza muviri wako wakananga, asiwo wakasununguka. Sezvo chete ipapo ndipo patichazowana iyo yakasarudzika positi, zvinova ndizvo zvatiri kutsvaga.
Gara uchizorodza muromo wako
Chokwadi kutora mamwe mapikicha emuchato akanaka, zvakanakisa kubvisa mask kwechinguva chero bedzi tikaramba tiri kure uye mumhepo yakashama. Mushure meizvozvo, chakanakisa chinhu zorora muromo wako, edza kufambisa miromo yako sekunge ucharuma, kubvisa marudzi ese emakakatanwa. Mushure meizvozvo, inguva yekunyemwerera kwepanyama uye rega mutori wemifananidzo aite zvimwe zvese. Edza kusamanikidza kunyemwerera kana kudzvinya miromo yako kune iyo pikicha. Zvakanakisisa kufunga nezve iyo nguva iwe yauri kurarama uye kunyemwerera kwacho kuchazvibudira pachako.
Tarisa zvishoma pasi
Iwe haufanire kudzikisa musoro wako, nekuti isu tatoziva kuti kune akawanda uye mazhinji achave neakaviri chins. Asi kuita kuri nyore kwekutarisa pasi uye kungofambisa maziso izano rakanaka. Nekuti nenzira iyi, kumeso kunozororawo nekusatarisa mukamera, iyo inotisiya isu zvakanyanya zvinoshamisa mhedzisiro. Mufotori wako anonyatso sarudza zano rakadai nekuti rinogara richibudirira.
Iyo yakanakisa yakazara-muviri mamiriro
Kana chiso chako chichiita kuti ushushike, saka kana iwe uchifanira kuisa yakazara-kureba iwe hausi kuzosiiwa kumashure. Saka, kuitira kuti zvinhu zvese zvigare zvichifamba zvakanaka, zviri nani kana rimwe gumbo riri kumberi kwerimwe. Kana iwe uchida, edza zvakare kumira zvishoma pachigunwe, kana zvikaonekwa uye pasina kurasikirwa neyakaenzana, hongu. Edza kusazvimanikidza kuisa dumbu nevamwe, nekuti zvakare tinenge tichitaura nezve zvakasikwa zvichisiiwa kumashure uye izvo zvinoratidzwawo kumeso. Chinhu chakanakisa kubheja pane yechisikigo pose asi nemazano aya atinokusiya.
Kufambisa mafoto kunogara kuchikunda
Iwe wakanyatsovaona mune inopfuura imwechete yemuchato pikicha. Zvakanaka ikozvino tinofanirwa kuvimba navo zvakare kuti vabude zvakakwana. Nekuti kana takamira, takanyarara, pamwe iko kuedza kwechisikirwo hachisi chinhu chinobuda matiri. Asi Kana tikaita chero kufamba, sekufamba kana kusimudza maoko nekubata rokwe, tichaona kuti chinangwa chinotifadza sei. Sarudzo hadziperi, asi izvi zvinogadzira mhepo shoma uye hazvina kumbotaurwa nani, kuguma nemifananidzo ine hupenyu hwakawanda uye zvakasikwa. Ndeapi mazano ako ekutevera mapikicha emuchato akakwana?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Mifananidzo yemuchato, sei kugara uchitaridzika zvakanaka?
Anosimudzwa matafura ekofi